Valandresaka nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo Ambulances teny amin’ny CCI Ivato - ewa.mg
News - Santé - Valandresaka nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo Ambulances teny amin’ny CCI Ivato
Nandritra ny fotoana nandraisana ireo ambulances miisa 06, teny amin’ny CCI Ivato dia nanao valandresaka hoan’ny mpanao gazety ny Minisitriny Fahasalamam-bahoaka, Prof RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, nitondra fanazavana momba ireo fanomezana ireo sy nisaotra ny Filoha sy ny Praiminisitra, ny mpikambana ao amin’ny Governemanta ary ireo mpiaramiombonantoka.Nandritra izany fotoana izany ihany koa no nanentanany ny tsirairay ny amin’ny fiatrehana ny CORONAVIRUS.
Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANP
L’article Valandresaka nifanaovana tamin’ireo mpanao gazety nandritra ny fandraisana ireo Ambulances teny amin’ny CCI Ivato a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Fakana voamaso tany Toliara II : Olona roa hatolotra ny fampanoavana
Habibiana tsy roa aman-tany no mihatra amin’ny mponina ao Toliara II. Miverina mahazo vahana indray ny fakana voamaso any amin’ity renivohitra iray ity. Mampametra-panontaniana ny maro izao zava-misy izao, satria dia efa karazana vonoan’olona tsotr’izao no kendren’ireo olon-dratsy. Mitetika valifaty na koa lonilony no tena mitranga, hany ka mahatonga izao resaka fakana voamason’ankizy mampihorin-koditra izao. Ny zava-misy aloha izany dia tsy vonoina fa ny maso ihany no tena alain’ireo tsy mataho-tody, raha ny tranga efa hita tany amin’iny faritra iny. Raha tsiahivina dia zazalahikely vao enina taona no niharan’ny herisetra nataon’ireo olon-tsy fantatra, tany amin’ny fokontany Ankiliabo, kaomina Ankililoaky, ny zoma lasa teo. Araka ny fanazavana voaray, zaza efa kilemaina izy ity no mbola nanamparan’ireo olon-dratsy ny habibiana, rehefa avy nalaina an-keriny ary noloarana tamin’izany ny voamasony roa. Olona roa avy hatrany no voarohirohy tamin’izany, ary voatazona eny amin’ny zandary amin’izao fotoana izao, raha toa ka mbola manaraka fitsaboana ity farany. Hatolotra ny fampanoavana any Toliara kosa izy ity anio raha tsy misy fiovana. Efa mateti-pitranga ny habibiana tahaka ity, na eto amintsika na any amin’ny faritra hafa. Ny fantatra kosa amin’izao dia efa miverimberina izy ao amin’ny distrikan’i Toliara II. Efa nisy sahala amin’ity ihany koa tany amin’ny fokontany Belavenoka kaomina Milenaka, ny tapaky ny volana janoary lasa teo. Teo ihany koa ilay ramatoa vaviantitra avy naka kitay noloaran’ny olon-dratsy tamin’ny famaky ny voamasony. Hatreto, mandeha ny fanadihadiana hoe inona tokoa izany no tena mampihazakazaka ny olona ao Toliara ao manao ity halatra voamaso ity, izay matetika ireo ankizy no lasibatra? Raha ny tsilian-tsofina mantsy, misy ny milaza fa azo hatao fanafody ihany koa izy itony, tahaka izany ihany koa ny taolam-paty, saingy miharihary fa efa tena mivadika biby ny olombelona mahavita manao izao habibiana izao. Valérie R. L’article Fakana voamaso tany Toliara II : Olona roa hatolotra ny fampanoavana est apparu en premier sur .L’article Fakana voamaso tany Toliara II : Olona roa hatolotra ny fampanoavana a été récupéré chez Triatra.
Fanambaran’ny UE – «Raharaha Farafangana»: «Aoka hangarahara ny vokatry ny fanadihadiana»
Efa tonga any amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny « Raharaha Farafangana » ka nanindrian’izy ireo ny tsy tokony hahamaty momoka ny tahaka itony. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny Vondrona eoropeanina, omaly, manoloana ny fitifirana nataon’ny mpitandro filaminana ka nahafaty gadra nandositra miisa 20 mahery tany Farafangana. « Manantena izahay fa hizotra araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana ary hampahafantarina ny besinimaro ao anatin’ny mangarahara ny vokatr’izany », hoy izy ireo. Nankasitrahin’ny UE ny fanambaran’ny minisitry ny Fitsarana ny hanofakana fanadihadiana momba io raharaha io, ahafantarana ny tena tompon’antoka.Tsy vitan’ny fanorenana fotsiny fonja …Etsy andaniny, notakin’izy ireo ny hanohizana ny ezaka ho amin’ny fampanajana ny zon’olombelona. « Tafiditra ao anatin’izany ny momba ireo efa migadra na koa ireo hazonina am-ponja nefa tsy mbola voatsara. Anisan’ny niteraka ny fandosiran’ireo voanfonja izany », hoy ihany ny UE. Nohitsin’izy ireo koa fa tsy tokony hianona fotsiny amin’ny filazana fa hanorina fotodrafitrasa, fonja ihany. Tokony hovana hatrany ifotony ny resaka fitsarana sy ny rafitra momba izany. Manampy izany ny rafitra sy ny fomba fiasan’ireo mpiandry fonja.Synèse R.L’article Fanambaran’ny UE – «Raharaha Farafangana»: «Aoka hangarahara ny vokatry ny fanadihadiana» a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasan’ny kaominina Antananarivo :: Hatsangana etsy Anosy ny tsena rihana efatra
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tao amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny tanànan’Antananarivo, tetsy Analakely, ny fivoriana tsy ara-potoanan’ireo mpitantana sy mpanolotsainan’ny tanàna. Isan’ny vinavinan’asa goavana nampahafantarin’ny Ben’ny tanàna, Andriatsitohaina Naina, ny fananganana tsena lehibe manana rihana efatra etsy amin’ny fiantsonan’ny fiara am-pitan’ny lapan’ny Antenimierandoholona etsy Anosy. Lehibe ihany koa ny asa fanavaozana ny tsenan’ny « Coum » eny 67Ha. Fampahafantarana tamin’ ny ankapobeny an’ireo lahadinika kosa no azo amintinana an’ity andro voalohany ity satria hitohy mandritra ny roa andro manaraka ny fandinihana sy fankatoavana an’ireo tetikasan’ny kaominina Antananarivo renivohitra ireo. Nomarihin’ny ben’ny tanàna avy hatrany fa : « tanim-panjakana ny etsy Anosy ka hamahana ny olan’ny tsena no antony hanorenana fotodrafitrasa goavana eny, izay hatokana ho an’ireo mpivarotra ivelan’ny tsena etsy Anosy sy Anosibe » . Ankoatra izay, dia saika mifototra amin’ny fanavaozana ny endriky ny tanàna sy amin’ny lafiny fahadiovana sy fidiovana ny tetikasa maromaro ambiny, hatramin’ny faran’ity taona 2020 ity, miampy ny fametrahana daba fanariana fako dimampolo amby zato manerana an’ireo fokontany, ny famadihana ny Kianjan’ny demokrasia etsy Ambohijatovo ho lasa zaridaina misy dobo sy fambolen-kazo ary ny fanavaozana trano lehibe iray etsy Behoririka. L’article Tetikasan’ny kaominina Antananarivo :: Hatsangana etsy Anosy ny tsena rihana efatra est apparu en premier sur AoRaha.
Chapelle Militaire: nahazo tohana avy amin’ny MDN ny Aomonie Miaramila
Tsy nataon’ny Foloalindahy ambanin-javatra ny finoana. Porofin’izany ny fananan’izy ireo fitaizam-panahy miisa efatra eo anivon’ny Foloalindahy Malagasy. Tsapan’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Léon Richard ny andraikitra sahanin’ireo Aomonie Miaramila amin’ny fanabeazana ara-panahy ireo miaramila eo anivon’ny Tafika Malagasy sy ny zandarimaria ka nahatonga azy nanolotra fiara 4×4 iray sy fanampiana vola mitentina 6 tapitrisa Ar hoentina hampandehan-draharaha eo anivon’ny fiangonana. Notanterahina nandritra ny fivavahana iraisam-pinoana nataon’ny MDN, omaly teny amin’ny Chapelle Militaire Ampahibe izany. nahatsiaro manokana ireo olona niharam-boina taorian’ny matso teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina izy. Mbola nampanantena ihany koa ny minisitra fa hijery akaiky sy hanatsarana ny fiangonana izay hita fa mila fanavaozana sy fanitarana.Jean ClaudeL’article Chapelle Militaire: nahazo tohana avy amin’ny MDN ny Aomonie Miaramila a été récupéré chez Newsmada.
Miditra amin’ny fananganana ny fototra ambony ho an’ny toeran’ny mpijery na ny «gradins» vaovao ny asa ao amin’ny kianja Barea, etsy Mahamasina, amin’izao fotoana izao. Fantatra fa ny sivifolo isan-jaton’ny asa fanamboarana ny fototra (midina telopolo metatra ambanin’ny tany) miisa roa amby fitopolo amby zato no efa tontosa. Mandroso miaraka amin’izay ny fitarihandrano. Navily lalana ao anatin’ny asa mandeha ankehitriny izany ka lasa mizara manodidina ny kianja, raha namakivaky tao ambanin’ny kianja filalaovana ny fantsona lehibe mitondra ny rano avy any amin’ny faritra ambonin’i Mahamasina (Andohalo, Tsimialonjafy) mankany Anosy. Kendrena ho azo ampiasaina alohan’ny 14 oktobra 2020 kosa ny « tribune », rehefa nisedra fahatarana fanavaozana azy noho ny Covid-19. Manodidina ny fitopolo isan-jaton’ny rafitry ny « tribune » ivelany no vita. Eo amin’ny rihana fahatelo, amin’ny rihana efatra ny fanamboarana, ankehitriny. Efa voarafitra manaraka ny fenitra ny fantsona ho an’ny jiro sy ny rano, ho an’ny ao anatiny. Voaomana ihany koa ireo efitrefitra samihafa, toy ny birao sy toeram-panomanana isankarazany, ny toeram-pivoahana ary ny tohatra. Mandritra ny fotoanan’ny orana no hamitana ny pitsopitsony anatiny rehetra. Bozaka voajanahary Anisan’ny fepetra takian’ ny FIFA amin’ny fanamboarana kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fiarovana ny mpijery. Hisorohana ny fifanosehana miteraka faharatrana sy ny fahafatesana olona amina lalao na fotoana lehibe no tanjona. « Hisy tohatra fidirana lehibe roa hatsangana amin’ny sisin’ny « tribune » ka hitondra avy hatrany ny mpijery ao amin’ny rihana voalohany. Mirefy 726m avy ireo ary mahazaka olona 2 904, miara-miditra na miara-mivoaka », hoy Andriamanohisoa Gérard, mpikambana ao anatin’ny komity misahana ny asa fanavaozana ny kianja. Eo am-pifantenana ny orinasa hanatanteraka ny fanavaozana ny kianja filalaovana kosa, ny orinasa sinoa CSCOD, izay miandraikitra ny fanamboarana ny Kianja Barea. Bozaka voajanahary no hatao hilalaovana eo Mahamasina, saingy misy fomba fanondrahana avy any ambanin’ny tany. Vinavinaina amin’ny volana desambra ho avy izao ny fametrahana ireo fantsona fanondrahana any ambanin’ ny tany. Aorian’ny fotoampahavaratra manaraka eo kosa no hanomboka hampitsiry ny bozaka. L’article Fanamboarana ny kianja Barea :: Vita 90% ny fototry ny « gradins » etsy Mahamasina est apparu en premier sur AoRaha.